Singumvelisi, hayi umntu ophakathi.
I-Hebei Besttone Fashion Co, Ltd ebekwe eShijiazhuang, ikomkhulu lePhondo le-Hebei, 280km ukusuka eBeijing.Sinabasebenzi ngokuthe ngqo: 520 Fundisa abasebenzi: 30 Ukusika icandelo: 15 Ukugqiba: 25 Ukupakisha: 30.
Thina ayisiyomizi mveliso yethu kuphela kodwa ikwasebenza nemizi-mveliso emininzi.Sinemveliso enkulu ye-150,000 yokudibanisa ngenyanga. Ke ngoko, somelele kakhulu kwimveliso, sinokuqiniseka ukuba usinika iodolo yakho.
Ukusuka ekusikeni, kwimveliso ukuya kwiinkampani zokupakisha zineseti yazo epheleleyo yezixhobo. Ngoku ndiza kukubonisa izixhobo zethu ukukunika ukuqonda okubanzi ngathi.
Okokuqala, sinezixhobo zokusika iingubo ezizenzekelayo ezinokusika amanye amalaphu aqhelekileyo.Secondly sinomatshini wokusika ukukhanya okuzenzekelayo, inzuzo yawo kukuba akukho xinzelelo loomatshini kwinto leyo, ke ayizukubangela deformation ngenxa yoxinzelelo olugqithisileyo Kuba iimilo entsonkothileyo, nayo kunqunyulwa kanye ukuqinisekisa ubungakanani izixhobo kunye nokwandisa ubuchule bempahla.
Zonke iintlobo zeetemplate kunye noomatshini abakhethekileyo abenza kube lula kuthi ukuba sijongane nazo zonke iintlobo zemigca empahleni, ayiphuculi kuphela ukusebenza ngokuthunga, kodwa ikwaphucula ubuhle bemveliso.Zipper kunye nokumba ibhegi yokuthunga kunokwenziwa ngokukhethekileyo itemplate.
Iindidi ezahlukeneyo zoomatshini zisenza sikwazi ukwenza iintlobo ezahlukeneyo, enjalo thina ibhatyi / idyasi engenamakhaphukhaphu, idyasi / ivesti yoboya, ibhatyi yesikhumba / idyasi njalo njalo.
Ukucinezela kunye nokupakisha kunye nokulungiselela izinto ngobuchwephesha kakhulu.ukuqinisekisa ukufika kakuhle kweempahla zakho kwindawo echongiweyo.